झींगाका साथ भेर्डिनस - थर्मोमिक्स रेसिपीहरू ThermoRecines
तरकारीहरू791 मिनेट2 व्यक्ति450२ क्यालोरी
झींगाका साथ यी भर्दिनाहरू स्वादले भरिएको प्रामाणिक प्लाटाजो हुन् जसको साथ तपाईं सुन्दरताको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ। हाम्रो ग्यास्ट्रोनोमीको प्रामाणिक व्यंजनहरू सप्ताहन्त पकाउँदा आनन्द लिने उत्तम।
फलफूलहरू पकाउन धेरै सजिलो हुन्छ, यद्यपि तपाईंले यो पक्का गर्नुपर्दछ कि कच्चा माल गुणस्तरको हुन्छ ताकि परिणाम राम्रो छ, पूरै बीन स्वादले भरिएको छ।
यो कुनै श doubt्का बिना, एक नुस्खा हो सरल र परम्परागत जस्तै हाम्रो हजुरआमाले बनाउनुहुन्छ कि शरीर पोषण र आत्मा सान्त्वना।
1 झींगाको साथ भेर्डिनस
2 के तपाईं झींगाको साथ भर्डिनसको बारेमा बढी जान्न चाहानुहुन्छ?
2.1 यस रेसिपीलाई तपाइँको Thermomix मोडेलमा अनुकूलन गर्नुहोस्
एक स्वादिष्ट पकवान जुन तपाईं परम्परागत व्यंजनहरूको आनन्द लिनुहुनेछ।
भान्छा कोठा: पारंपरिक
तयारी समय: 12H
खाना पकाउने समय: १२ एच M एम
स्टक को लागी
G० ग्राम तेल
गुणस्तरीय पानी को g० g
१ सानो प्याज
एक दिन अघि हामीले तरकारीहरू एउटा भाँडामा हाल्थ्यौं र प्रशस्त पानीले तिनीहरूलाई छोपौं। हामी तिनीहरूलाई 8 र १२ घण्टा बीचमा सोख्न दिनेछौं।
भोलिपल्ट, हामी पुच्छर छोड्छौं कि तिनीहरू अलग नहोस्।
हामीले टाउको र छालाहरू शीशामा राख्यौं, तेल थप्नुहोस् र कुकौं Minutes मिनेट, १२०º डिग्री, वेग २।
हामी पानी र उदार चिम्टी नुन थप्छौं। हामी प्रोग्राम Minutes मिनेट, तापमान º ० डिग्री, गति २।
समय पछि, एक साँघुरो जाल strainer र रिजर्व मार्फत स्टक तनाव।
भान्साको कागजको साथ हामी स्टकको भग्नावशेषलाई गिलासबाट हटाउँछौं तर धुलोबिना ब्रोथको पदार्थ हराउँदैनौं।
हामीले तरकारीबाट पानी छोड्छौं र राम्रोसँग निकाल्छौं। हामीले त्यसलाई गिलासमा सफा प्याज, गाजर र लीक र ठूला टुक्रामा राख्यौं। हामी १०० ग्राम पानी र कार्यक्रम थप्छौं Minutes मिनेट, १००º, चम्चा गति, बाँया पालो।
जब पानी तातो छ, कभर र प्रोग्राम नगरेसम्म स्टक थप्नुहोस् Minutes मिनेट, १००º, चम्चा गति, बाँया पालो।
पकाउँदा हामी भर्डिनलाई श्रोपबाट नछोड्नको लागि हेर्नेछौं।
जब भर्डाइनस पहिले नै कोमल छन्, हामी उनीहरूलाई धेरै होशियारीले तान्दछौं ताकि तिनीहरू भाँच्दैनन्। त्यसोभए हामीसँग एक तिर वर्डिनास र अर्कोमा ब्रोथ हुनेछ।
हामी ब्रुथलाई पछाडि गिलासमा राख्छौं साथमा लीक, गाजर र प्याज। हामी समयमा कुचल्छौं १ मिनेट, गति 1। यदि हामीले देख्यौं कि यो मोटो भएको छ भने हामी यसलाई अधिक स्टक थपेर यसलाई कम गर्न सक्छौं।
भर्डिनास थप्नुहोस् र खुल्ला प्रँगहरू थप्नुहोस् जुन हामीले सुरुदेखि नै सुरक्षित राख्यौं। हामी पकाउछौं Minutes मिनेट, १००º, चम्चा गति, बाँया पालो।
हामी भर्डानेस र झींगालाई गहिरो प्लेटहरूमा विभाजन गर्दछौं र तुरुन्तै सेवा गर्दछौं।
यो सम्भव छ कि point बिन्दुमा तपाईंले समयहरू विस्तार गर्नुपर्नेछ। स्टक र कार्यक्रम जोड्न नबिर्सिनुहोस् तपाईंले अनुमान गरेको समय, उही तापमान र गतिको साथ। बाँया मोडलाई नबिर्सनुहोस्।
के तपाईं झींगाको साथ भर्डिनसको बारेमा बढी जान्न चाहानुहुन्छ?
भर्दिना एक प्रकारको हो अस्टुरियसबाट विशिष्ट बीन र त्यो पनि बढेको छ मारिया लुसेन्से। यो माछा र शेलफिसको साथ तयार गर्न सबै भन्दा माथि प्रयोग गरिन्छ, या त मिश्रित वा केवल झींगा, क्लैमहरू, झींगासँग ...
तपाईले बाँकी फलियाबाट यसलाई छुट्याउन सक्नुहुनेछ किनकि यो हो सानो, सपाट, धेरै राम्रो छाला र एक राम्रो हरियो रंग छ जुन सब भन्दा विशेषता हो।
तिनीहरू हरित छन् भन्दैमा तिनीहरू ताजा छन् भन्ने होइन, केवल तिनीहरू संकलन गरिएको छ अपरिपक्व जब तिनीहरू अझै एसएपी को एक ठूलो मात्रा छ त्यसकारण उनीहरूसँग यस्तो अचम्मको रंग छ।
वास्तवमा, भर्डिनेस सुक्खा बेचिन्छ र तिनीहरूलाई प्राप्त गर्न, तपाईं जानु पर्छ बजार र विशेष स्टोरहरू वा तिनीहरूलाई अनलाइन खरीद गर्नुहोस्।
तिनीहरू सुक्खा भएको रूपमा तपाईंले तिनीहरूलाई कम्तिमा hours घण्टा भिजाउनुपर्नेछ। र याद गर्नुहोस् कि खाना पकाउने समय तिनीहरू कति लामो सुक्खामा निर्भर गर्दछ, त्यो हो, उनीहरू जे जति पुराना हुन्छन्, अधिक मिनेट उनीहरूलाई आवाश्यक पर्दछ।
मैले पहिले भनेझैं तपाई तिनीहरूसंग बिभिन्न प्रकारको माछा र समुद्री खानाको साथ जान सक्नुहुन्छ। म प्राय: तिनीहरूलाई तयार गर्दछु झींगा वा झींगा। झींगाको सबै भन्दा गहिरा स्वाद हुन्छ र झींगामा धेरै मासु हुन्छ तर दुबै मध्ये एक जना पनि नुस्खासँग राम्रोसँग जान्छ।
दुवै झींगा र झींगा तिनीहरू धेरै छिटो पकाउँछन् त्यसोभए तिनीहरूलाई थप्नु अघि म तपाईंलाई सल्लाह दिन्छु कि यो कुरा निश्चित गर्नुहोस् कि भर्डिनस पहिले नै तयार छ।
सम्झनुहोस् कि नुस्खा मा संकेत भन्दा अलि बढी लिन सक्दछ। तपाईंले तिनीहरूलाई प्याड गर्नुपर्दछ र तिनीहरूलाई अलि बढी समय दिनुपर्दछ र तपाईंले स्वादले भरिपूर्ण बिन्दु कसरी पाउनुहुन्छ भनेर देख्नुहुनेछ।
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: Celiac, क्षेत्रीय भोजन, तरकारीहरू
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » सामान्य » क्षेत्रीय भोजन » झींगाको साथ भेर्डिनस
सूर्यफूल तेलको साथ काटिएको रोटी
Piquillo सॉसको साथ मांस cannelloni